Fiainana mpanakanto :: Mametraka ny dian-tanany i Andriaina Rakotonirina • AoRaha
Fiainana mpanakanto Mametraka ny dian-tanany i Andriaina Rakotonirina
Maro ireo tanora mankafy mozika. Vitsy kosa ireo manana famoronana miavaka amin’ny mahazatra ka isan’izany I Andriaina Rakotonirina. Nanolotra ny rakikira voalohany niarahany tamin’I The Niconni izy, ny 24 aogositra teo. Manomana seho hiarahana amin’I Tooln kosa ny 7 septambra ho avy izao, etsy amin’ny Institut Français de Madagascar (ifm) Analakely. Vahavahany amintsika manaraka eto ny niainany ny maha mpanakanto azy. Toroany hevitra ihany koa ireo namana tanora toa azy izay manan-talenta sy maniry hiditra anatin’ny tontolon’ny mozika.
Lehibe tao anaty mozika
Fony mbola kely, efa tao anatin’i Andriaina Rakotonirina ny fitiavana mozika. Vao 6 taona monja ny tovolahy dia efa nankafy nitendritendry gitara. Io zavamaneno io avy eo no nitaiza azy ary nanosika azy ho mpanakanto ankehitriny. Rehefa naheno an’i Michael Jackson kosa izy taty aoriana kely vao nanomboka tia nihira. « Enina taona aho nanomboka nikitikitika gitara tato an-trano, izay no nifandraisako tamin’ny mozika voalohany. Nitendry gitara foana no nataoko, rehefa naheno an’i Michael Jackson kosa aho no nanomboka tia nihirahira », hoy i Andriaina Rakotonirinany.
Manan-talenta sy fahaizana ary fahalalana maro i Andriaina Rakotonirinany. « Misehatra eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana aho ankoatra ny mozika. Ny sakafo ara-pahasalamana (alimentation saine) no himasoako miaraka amin’ny namana hiaraha-miasa », hoy hatrany izy manazava.
Tsy nihevitra ny ho mpanakanto toy ny rehetra i Andriaina. Mitondra rivo-baovao izy ary eo am-pihainoana ny mozikany no haharenesana fa miala amin’ireo fihaino mahazatra ilay rakikira « Seven » navoakany. « Miezaka aho mitondra zavatra vaovao eo amin’ny sehatry ny mozika. Manentana sy manosika ireo mpanakanto hanandratra ny maha izy azy fa tsy variana mitady fankasitrahana amin’izao rehetra izao, ka manary ny maha sarobidy azy », hoy i Andriaina manoro hevitra tsikelikely ireo tanora namany. Faritany ho gadona « Hybride » ity zava-baobao entiny ity. Fangarona feon-kira isan-karazany avy amina toerana maro toa an’i Madagasikara, Afrika, Eoropa izy io. Mifangaro ihany koa ny teny ampiasina anatin’ny hira atao.
Handrisika ireo tanora hanana famoronana sy ho liana amin’ny fivoaran’ny mozika no tanjona. Izay hatrany ny asehony anatin’ilay rakikira voalohany niarahany tamin’i Niconini. « Ny namolavolana azy? Aingam-panahy ranoray navela naka sehatra. Teo amin’ny roa volana no nanaovanay iny rakikira iny. Miainga amin’ny fitiavana hatramin’ny aretin-tsaina no resahanay ao. Tsy izaho irery no manoratra fa miaraka amin’i Marosoa izay namako mpanoratra. Marihina fa tsy mikasika ahy ny zavatra soratanay fa fandinihana fotsiny ihany », hoy ity tovolahy manazava an’ilay rakikira « Seven ».
Vao haingana no nisedra sehatra i Andriaina. Efa maro ireo mankafy ny mozikany. Ankamamian’ity mpanakanto ity manokana ny miaraka amin’ireo mpankafy azy. « Ny fahaizanay sy Niconni miaraka no tena nanamarika ahy indrindra teo amin’ny lafiny mozika. Ankoatra izay, ny fankasitrahan’ny mpijery tonga nanatrika ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ilay rakikira, ny sabotsy teo tao amin’ny Gare Soarano. Nahalatsa- dranomaso ahy mihitsy io fotoana io », hoy izy nanganohano. Malemy fanahy sady tia mifanerasera amin’ny olona rehetra ny tovolahy. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ihany koa izy. Tsy vitsy ny mpanakanto izay mifaneresare aminy. Nisedra olana anefa izy teo amin’ny fiainany ny maha mpanakanto azy. Manamafy azy hatrany kosa ny fanohanan’ireo manodidina azy.
Manana hafatra ho an’ireo tanora toa azy izy. « Ho an’ireo tanora te hanao zavatra indrindra no tena tiako hampitaina torohevitra. Tsy ilaina ny manaraka be fahatany ireo zavatra efa misy, indrindra eo amin’ny sehatry ny mozika. Fadiana ny milalao ireo mozika efa be mpanao hahazoana vola haingana. Ilaina ny manana ny maha izy azy anao, na eo amin’ny gadona, na eo amin’ny aingam-panahy ao anaty tonon-kira. Eo vao mianatra mivarotra ilay mozika atao. Ireo rehetra ireo no hahafahana mampivoatra hatrany ny tontolon’ny mozika sy manatsara azy », hoy i Andriaina.
Taorian’ny famoahana ny rakikira dia efa manaparitaka izany eny amin’ny ivon-toerana samihafa i Andriaina. Ny hetsika karakarain’ny IFM Analakely no nataony hanohanana ny zavakanto eto Madagasikara. Amin’io fotoana io ity mpanakanto ity no hihira ny ampahan’ny vokatra vitsivitsy ao anatin’ny rakikirany. Mizara ny sehatra amin’ny TOOLN, izay vondrona mpanao rap manaitra izy amin’io fotoana io. Manasa ireo tanora liam-pivoarana sy liam-pamoronana toa azy izy hankafy ity fotoana ity.
Fampianarana momba ny nomerika :: Mikarakara atrikasa amin’ny teknolojia ny AFT Andavamamba